Portainer: iyo web-yakavakirwa graphical interface yeDocker | Linux Vakapindwa muropa
Portainer - iyo yewebhu-yakavakirwa graphical interface yeDocker
Isaac | | Sisitimu Yekutonga, Resources
Kana iwe uchiwanzoshanda nemidziyo uye Docker, unogona kufarira kuziva iyo Portainer chirongwa. Iyo graphical interface kubva kune iyo yekugadzirisa uye kushanda nemidziyo uye Docker mune yakanyanya kuwanda uye yakapusa nzira. Iyi GUI ndeyewebhu-yakavakirwa, saka inogona kushandiswa kuyambuka-chikuva. Uye zvakare, inobvumidza manejimendi ayo ese ari kure, kushanda nemidziyo pane mimwe michina kana maseva, uye nemunharaunda.
Para mamwe mashoko unogona kuenda ku yepamutemo webhusaiti yePortainer chirongwa, kwaunowana zvinyorwa uye ruzivo rwekuti ungashanda sei nazvo. Nenzira, isu tinokwanisa kushandisa iyo Portainer Nharaunda Yekutsikisa bhodhi iro risingaremi uye rakavhurika sosi uye zvakare Portainer Mumiriri iyo isiri yakavhurika sosi. Naizvozvi isu tinokwanisa kubata midziyo, mifananidzo, network uye mavhoriyamu nenzira yakapusa
Chishandiso ndeche inoenderana neDocker injini uye neDocker Swarm. Pakati pezvinhu zvaunowana muPortainer iri nyore webhu-yakavakirwa graphical interface kubva kwaunogona kure kana kwazvino kutarisira makontena, kutanga iwo, kumisa, kuvauraya, kuatangazve, kuaisa kumbomira, kuapa zita, kudzima iwo, uye wedzera midziyo, gadzira mifananidzo, uisimudze. netiweki, tarisa matanda nemidziyo inomhanya (CPU, ndangariro, kushandiswa kwenetiweki, maitiro, ...), mhanyisa koni kuti uzviwane, shanda nemavhoriyamu, nezvimwe.
Basa rakazara suite rinoita kuti zvinhu zvive nyore kwauri. Nenzira, kana iwe uchida kuyedza chiitiko Demo, unogona kushanyira webhusaiti http://demo.portainer.io/ uye kubva ipapo unogona kunyoresa nesetername arun uye password tryportiner. Ndinovimba ruzivo urwu rwuchakubatsira iwe kugadzirisa ako makontena kana iwe uchiri kusaziva maPortainers uye kuti zvinoita kuti basa rako rezuva nezuva riite nyore zvishoma. PaLxA isu tinoedza kushanda kuti tipe rudzi urwu renhau uye nekuita kuti zvinhu zvive nyore kune avo vese vanotiverenga kazhinji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Portainer - iyo yewebhu-yakavakirwa graphical interface yeDocker
Tweetdeck inozopedzisira yagadziriswa neGIFS, mapolls, emoji uye tambo